यी कुरामा ध्यान दिनुस् आज यो वर्षको पहिलो सूर्यग्रहण ! नारी हरुले जान्नै पर्ने पढेर शेयर गरौ! - Taja Report
Homeरोचकयी कुरामा ध्यान दिनुस् आज यो वर्षको पहिलो सूर्यग्रहण ! नारी हरुले जान्नै पर्ने पढेर शेयर गरौ!
July 13, 2018 रोचक Comments Off on यी कुरामा ध्यान दिनुस् आज यो वर्षको पहिलो सूर्यग्रहण ! नारी हरुले जान्नै पर्ने पढेर शेयर गरौ!
२९ असार, काठमाडौं । आज यो वर्षको पहिलो सूर्य ग्रहण लागेको छ । बिहान करिब साढे सात बजेबाट सुरु भएको सूर्यग्रहण बिहान करिब १० बजे सकिने छ ।
शौचालय पनि युबतिकोलागि सुरक्षित छैन्,बलात्कारीले त्यहाँ पनि छोडेनन्,बलात्कारीलाई के सजाय ठीक होला [भिडियो हेर्नुहोस